Home News Ciidamada Dowladda iyo Ururka Al Shabaab oo ku dagaalamay Gobolka Gedo
Al-Shabaab ayaa dhowr jiho ka weeraray degmada Balad-Xaawo,hayeeshee dad ku sugan degmada Balad-Xaawo ayaa u sheegay warbaahinta in daqiiqado kadib ay Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland isaga baxeen degmada Balad-Xaawo.
Dagaalkii koobnaa iyo madaafiicda xalay la isku-weeydaarsaday degmada Balad-Xaawo ayaa la sheegay inay ka dhasheen khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah,waxaana dad ku sugan Balad-Xaawo ay sheegeen in Al-Shabaab gowraceen Nabadoon Caanka ahaa degmadaas.
Al-Shabaab ay mudo dhowr Saacadood ah gacanta ku haayay degmada Balad-Xaawo kadib markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay isaga baxeen.
Wararka saakay naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan,isla markaana ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay degmada dib ugu soo laabteen,iyaga oo markii hore tegay Magalada Mandheera.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo la kulmay dhigiisa Dalka Talyaaniga
Next articleNabadoon lagu dilay Gobolka Gedo
Ciidmada gaarka ah ee DANAB & Al-Shabaab oo ku dagaalamay Shabeellaha...